नवराज विक र साथीहरुको आ'त्मले शान्ति न'पाउदै डोल्पामा भेरीले फेरी ३ जनालाई ब'गा'यो ! - Filmy News Portal Of Nepal
नवराज विक र साथीहरुको आ’त्मले शान्ति न’पाउदै डोल्पामा भेरीले फेरी ३ जनालाई ब’गा’यो !
प्रेमीका लिन गएका नवराज विक लगायत अन्य ५ जनाले भेरीमा ज्या”न गु’माउन पर्यो । यो घ’टनाको अझै स’माधान भएको छैन् । यही समय डोल्पाको भेरी नदीले ब’गाउँदा तीन बालिकाको ज्या’न गएको छ ।
मंगलबार दिउँसो ठूलीभेरी नगरपालिका ९ स्थित मोतिपुरका १२ वर्षीया यशोधा भण्डारी, १० वर्षीया गंगा कठायत र १० वर्षीया विजय कठायत रहेका छन् । उनीहरु गाईबस्तु चराउन गएका थिए । गाई भेरी नदी तरेर पारि जान खोजेपछि गाई फर्काउन नदीमा बस्दा बगाएको डोल्पाका डीएसपी नारायण रञ्जितकारले बताए ।
दुई जनाको श’व बगाउँदै गरेको प्रहरीले देखेको थियो । विमानस्थल सुरक्षाकार्ड जुफालको टोलीले देखेपछि थप टोली गएर बालिकाहरुलाई नदीबाट निकालेको हो । उनीहरुको उद्धारका लागि प्रहरी कार्यालयबाट २२ जनाको टोली खटिएको थियो ।
उनीहरुमध्ये यशोधा भण्डारी र बिजय कठायतलाई २ किलोमिटर तल झारेको अवस्थामा प्रहरीले उद्धार गरेको थियो । उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको र केही समय पहिले अस्पतालले उनीहरुलाई मृ’त घोषणा गरेको डीएसपी रञ्जितकारले बताए । गंगा कठायतको श’व भने ५ किलोमिटर तल फेला पारेको थियो ।